Severin Hotel: Rakaabka ugu jecel 300 ee tareenada maalinlaha ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Severin Hotel: Rakaabka ugu jecel 300 ee tareenada maalinlaha ah
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hotelkii asalka ahaa ee Severin ayaa la furay 1913 markii uu bedelay Grand Hotel ee Indianapolis. Meesha ay ku taal si toos ah guud ahaan Jackson Place ee saldhiga midowga ayaa ka dhigtay hudheelka ugu jecel rakaabka 300 ee tareenada maalinlaha ah.
Waxaa dhisay Henry Severin, Jr., oo ah dhaxalka hantida dukaammada jumlada ah, isaga oo gacan ka helay horumarinta guryaha Carl Graham Fisher iyo James A. Allison.
Fisher iyo Allison waxay dhiseen wadada caanka ah ee Indianapolis Motor Speedway.
Hudheelka waxaa naqshadeeyay Vonnegut iyo Bohn, oo ah shirkad dhismeed oo firfircoon horraantii ilaa bartamihii qarnigii 20-aad Indianapolis.
Markii Bernard Vonnegut, Sr. uu dhintay 1908-dii, waxaa xilka kala wareegay wiilkiisa Kurt Vonnegut, Sr. kaas oo markii dambe noqday aabaha Kurt Vonnegut, Jr., qoraaga caanka ah.
Grand Hotel waxaa la dhisay 1876-kii, hal mar, waxaa iska lahaa Thomas Taggart oo markaasi lahaa Hudheelka Lick Springs ee Faransiiska. Taggart ka dib waxa uu soo noqday Duqa magaalada Indianapolis iyo Senator Maraykan ah oo ka soo jeeda Indiana.
Febraayo 19, 1905, dab ka kacay guriga weyn ee Fahnley & McCrea, ayaa ku fiday siddeed dhismo oo isku xiga oo uu ku jiro Grand Hotel, ka dibna hoteelka ugu weyn Indiana. Shan iyo afartan daqiiqo gudahood, siddeed dhisme oo ku yaallay degmada halista ah ayaa gebi ahaanba la burburiyay. Inkastoo khasaaraha hantiyeed lagu sheegay 1.1 milyan oo dollar, haddana waxaa nasiib wanaag laga badbaadiyay hotelka Grand oo burbur xooggan soo gaaray.
Hudheelka Severin waxa uu ku yaalaa meel aad u fiican oo ku yaala cirka sare ee Degmada Jumlad ee ku wajahan Saldhiga Ururka iyo inta badan huteelada deriska ah. Hudheelkan oo ka kooban laba iyo toban dabaq waxa uu ka samaysan yahay shamiidh la xoojiyay oo gidaarada lebenka ah. leydi ahaan qorshaha, waa kow iyo toban bays oo ballaaran oo ku teedsan Waddada Galbeedka Georgia iyo shan baraf oo ku teedsan Koonfurta Illinois iyo Wadooyinka McCrea. Labada dabaq ee hore waxa loo habeeyey nidaamka Renaissance ee daaqadaha qaansada. Laga soo bilaabo dabaqa saddexaad ilaa dabaqa laba iyo tobnaad, daaqadaha leydigu waxay raacaan qaab isku mid ah.
Dhowr milkiileyaal kala duwan ayaa maamulayay hoteelka ilaa laga iibsaday 1966-kii Warren M. Atkinson oo u bixiyay Atkinson Hotel. Sannadkii 1988-kii, Shirkadda Horumarinta Mansur waxay iibsatay hudheelka, ka dib 40 milyan oo doolar oo dib u soo celin ah, waxay u bixisay Omni Severin Hotel. Muddadii dib-u-soo-celinta, laba munaaradood oo laba iyo toban dabaq ah ayaa la dhisay, hoteelka la ballaariyayna waxaa lagu xiray Circle Center Mall iyo xarunta shirarka.
Lobby-ka asalka ah ee asalka ah wuxuu ku yaalaa qolka balleebka ee Severin maanta. Tareennada birta ah ee la la’yahay ee ka sarreeya hoolka laga galo ayaa laga helay meel 30 mayl u jirta hoteelka, waxaana lagu rakibay halkii ay markii hore ka yimaadeen. Sanduuqa waraaqaha naxaasta ah ee 1913 ayaa wali u shaqeeya sidii sanduuqa boostada ilaa maantadan la joogo. Lebisyada qolka martida mahogany adag ee asalka ah waxay ku yaalaan soo degista wiish kasta. Gudaha Severin Ballroom, chandelier-ka quruxda badan ee Australiyaanka ah iyo jaranjaro marmar ah oo yaab leh ayaa dib u soo celinaysa taariikhda quruxda badan ee hudheelka. Hotelka Omni Severin waxa uu ku taxan yahay Diiwaanka Qaranka ee Goobaha Taariikhiga ah waana xubin ka mid ah Hoteelada Taariikhiga ah ee Mareykanka.